iPartner ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့သူတွေအကြောင်း ဗွီဒီယိုကို ကြည့်လိုက်ပါ!
နောက်ဆုံးမှာတော့ အနိုင်ရရှိသူ ၃ဦးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်. အနိုင်ရရှိသူတွေရဲ့အမည်ကိုအသိပေးကြေငြာပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်. ပထမဆု Retina 4K display iMac ကိုရရှိသွားသူကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှMr. Setthaphong Onphuvieng ဖြစ်ပါတယ်. ဒုတိယဆု မျက်နှာပြင်အကျယ် 13 လက်မရှိသည့် MacBook Airကိုရရှိသွားသူကလည်းထိုင်းနိုင်ငံကပဲဖြစ်တဲ့ - Mrs. Kanokwan Sriniang ဖြစ်ပါတယ်. တတိယဆု ရွှေရောင် iPhone 7s Plusကိုရရှိသွားသူကတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ Mr. Safri Syamsudin ဖြစ်ပါတယ်. ဆုချီးမြှင့်ပေးအပ်တဲ့အစီအစဉ်ဗီဒီယိုအင်တာဗှူးကိုကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်!